China abakhiqizi besikhwama setiye le-PLA Corn Fibre nabaphakeli | JIERO-IQEMBU
Ububanzi bethu obujwayelekile buyi-140mm no-160mm njll.
Izihlungi zetiye eluhlaza, itiye elimnyama, itiye lokunakekelwa kwezempilo, itiye lemifino kanye nemithi yamakhambi.
Izinto ze-PLA ezibolayo ezakhiwe ngofayibha wommbila njengezinto ezingavuthiwe futhi zingabola zibe ngamanzi ne-carbon dioxide enhlabathini yemvelo. kuyinto ehambelana nemvelo. Ehola imfashini yetiye yamazwe omhlaba, yiba umkhuba wokupakisha kwetiye ongenakuvinjelwa ngokuzayo.
☆ Yisihlungi sesikhwama setiye esivela ezintanjeni ze-polylactic, ezihlanganiswa ngamakhemikhali (ezinama-polymerized) ngokusebenzisa ukuvutshelwa kwe-lactic acid kusuka kushukela wezitshalo ezingavuthiwe, okuvumela kakhulu ukungena kwamanzi nokugeleza kwamanzi, okwenza kube kuhle njengesihlungi samaqabunga wetiye.
☆ Ngaphandle kwezinto eziyingozi zitholwe ekuhlolweni kwamanzi abilayo. Futhi uhlangabezane namazinga okudla kwendle
☆ Ngemuva kokusetshenziswa, isihlungi singenza i-biodegrade kungakapheli isonto kuye enyangeni ngokusebenzisa umquba noma ukucubungula i-biogas, futhi singabola singene emanzini nasekhabhoni futhi Sizophinda sihlukane ngokuphelele uma singcwatshwe emhlabathini. Kodwa-ke, ijubane lokubola lincike ekushiseni kwenhlabathi, umswakama, i-PH, kanye nabantu abancane.
☆ Akunazizukulwane zamagesi ayingozi njenge-dioxin lapho ishiswa, ngasikhathi sinye, ukukhiqizwa kwe-GHG (njenge-carbon dioxide) ngaphansi kwepulasitiki ejwayelekile.
☆ PLA izinto zokubola ezihlukanisekayo ze-polylactic acid ezinezakhiwo ze-Antibacterial kanye nokumelana nesikhutha.
☆ I-PLA njengezinto ezibolayo, ezingasiza ekuthuthukiseni umphakathi.
Langaphambilini Unxantathu wenayiloni ongenalutho weSikhwama setiye
Olandelayo: Inayiloni mesh tea bags roll with tag